Vaovao - Niakatra be ny fitaovana. Tsy hampiakatra ny vidiny ve ny valin-drihana sy lamba famaohana ary famafana lena?
Niakatra be ny fitaovana. Tsy hampiakatra ny vidiny ve ny valin-drihana sy lamba famaohana ary famafana lena?
Noho ny antony maro samihafa dia nirongatra ny rojom-bidin'ny indostria simika ary nirongatra ny vidin'ny akora simika am-polony. Ny indostrian'ny vokatra madiodio dia mbola mizaka ny vokany amin'ity taona ity ary voakasik'izany mivantana.
Mpamatsy fitaovana akora sy mpanampy maro (anisan'izany ny polymera, spandex, lamba tsy tenona, sns.) Ao amin'ny indostrian'ny fahadiovana no nanambara ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny antony lehibe mahatonga ny fiakarana dia ny tsy fahampian'ny akora ambony na ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy tapaka. Ny sasany aza nilaza fa alohan'ny hametrahana baiko Mila mifampiraharaha indray.
Betsaka ny olona no mieritreritra hoe: Niakatra ny vidim-piainana, ho taraiky lavitra any ve ny taratasy fampakarana ny vidin'ny mpanamboatra vokatra vita?
Misy ny fahamarinana manamarina an'io. Eritrereto ny firafitra sy ny akora vita amin'ny lamba famaohana, napkinina ary famafana lena.
Ny lamba famaohana lena dia lamba tsy tenona indrindra, fa ny lamba famaohana sy lamba famaohana fahadiovana kosa matetika dia misy singa telo lehibe: ny sosona amboniny, ny sosona mitroka ary ny sosona any ambany. Ireo firafitra lehibe ireo dia misy akora simika sasany.
1. sosona ambony: fiakaran'ny vidin'ny lamba tsy tenona
Ny lamba tsy tenona dia tsy ny akoron'ny lamba famaohana sy lamba famaohana fotsiny fa koa ny lamba famafana lena. Ny lamba tsy tenona ampiasaina amin'ny vokatra fanadiovana fanary dia vita amin'ny kofehy simika ao anatin'izany ny polyester, polyamide, polytetrafluoroethylene, polypropylene, fibre carbon ary fibre vera. Voalaza fa miakatra ihany koa ny vidin'ireto akora simika ireto, ka ny vidin'ny lamba tsy tenona dia hiakatra miaraka amin'ny ilany, ary noho io antony io ihany koa dia hiakatra ny vokatra vita vita amin'ny vokatra madio.
2. sosona manintona: miakatra ny vidin'ny fitaovana mpitroka SAP
Ny SAP no singa mitambatra ao amin'ny sosona absorbent an'ny diapers sy napkinaly fanadiovana. Ny resina manintona rano makromolecular dia polymer iray manana fananana mitaona rano izay alain'ny poly monôme hydrofilika. Ny monomerika mahazatra indrindra sy mora indrindra toy izany dia ny acrylic acrylic, ary ny propylene dia avy amin'ny famakiana ny solika. Niakatra ny vidin'ny solika, ary ny vidin'ny asidra akrilika Taorian'ny fiakarana dia hiakatra ho azy ny SAP.
3. sosona ambany: fiakaran'ny vidin'ny polyethylene akora
Ny sosona farany amin'ny lamba famafana sy napkinina fanadiovana dia sarimihetsika mitambatra, izay misy sarimihetsika ambany miaina sy lamba tsy tenona. Voalaza fa ny sarimihetsika ambany mifoka rivotra dia sarimihetsika plastika novokarina avy amin'ny polyethylene. (PE, iray amin'ireo karazana plastika lehibe, dia namboarina avy amin'ny polyethylene Polymer material.) Ary ny etiléna, izay vokatra petrochemical be mpampiasa indrindra, dia ampiasaina matetika hanaovana polyethylene akora plastika. Mampiseho fironana miakatra ny solika tsy manara-penitra, ary mety hiakatra ny sandan'ny fonon-drivotra mifofofofo mampiasa polyethylene ho akora fototra rehefa miakatra ny vidin'ny polyethylene.
Ny fiakaran'ny vidin'ny akora dia tsy azo ihodivirana fa hanery ny vidin'ny mpamokatra vokatra vita. Amin'ity fanerena ity dia tsy misy zavatra mihoatra ny roa:
Ny iray dia ny mpanamboatra vokatra vita farany izay mampihena ny fividianana akora mba hampihenana ny tsindry, izay mampihena ny fahafahan'ny famokarana diapers;
Ny iray hafa dia ny mpamokatra vokatra vita mizara ny tsindry amin'ny agents, mpivarotra sy mpanjifa.
Na izany na tsy izany dia toa tsy azo ihodivirana ny fiakaran'ny vidiny amin'ny faran'ny fivarotana.
Mazava ho azy, vinavina fotsiny io voalaza etsy ambony io. Mihevitra ny olona sasany fa tsy maharitra ity onjam-bidim-pisondrotana ity ary mbola manana lisitra tohanana ny terminal ary mety tsy ho tonga ny fiakaran'ny vidin'ny vokatra vita. Amin'izao fotoana izao, tsy mbola misy mpanamboatra vokatra vita izay namoaka fanamarihana fiakaran'ny vidiny.